विशेषज्ञको भण्डार विभिन्न विषयहरूसँग सम्बन्धित विशेषज्ञहरूको विवरणको भण्डारण हो। यसको रूपाङ्कन एन.टी.एम. को आवश्यकताहरूको परिपूर्तिको निम्ति गरिएको हो। मुख्यतः एन.टी.एम को आन्तरिक गतिविधिहरूको निम्ति यसको प्रारूप निर्माण गरिएको भए तापनि सम्भवतः अन्य प्रयोगकर्ताहरूले पनि यसको उपयोग गर्नु सक्छ। मिशन अन्तर्गत भइरहेका अनुवादकहरूको मूल्याङ्कनको निम्ति निवेदन सिद्धान्त समीक्षकहरूलाई सहायक सिद्ध हुन्छ।
समीक्षकहरूको आवश्यकता भाषाको साथ साथै ती विषयहरूसँग पनि छ जून अनुदित पाठसँग सम्बन्धित छ। विशेषज्ञहरुको भण्डारले विषयमाथिको जानकारी सँगै भाषा विशेषज्ञहरूको जानकारी पनि उपलब्ध गराउँछ। एन.टी.एम. को अन्य गतिविधिहरू जस्तै अनुवादकको प्रशिक्षण कार्यक्रम, सङ्गोष्ठी अनि कार्यशालाहरूमा यो अभिकल्पित निवेदनमा उपयोग गर्न सकिन्छ।